(၂၀၂၀) ခုနှဈအတှငျး သှားရောကျလညျပတျသငျ့တဲ့ နရော (၅) ခု။ – SoShwe
Home/LifeStyle/(၂၀၂၀) ခုနှဈအတှငျး သှားရောကျလညျပတျသငျ့တဲ့ နရော (၅) ခု။
(၂၀၂၀) ခုနှဈအတှငျး သှားရောကျလညျပတျသငျ့တဲ့ နရော (၅) ခု။
So Shwe January 26, 2020	LifeStyle Leaveacomment
နှဈသဈကူးအားလပျရကျတှေ ပွီးဆုံးသှားလို့ စိတျညဈနကွေပွီလား ? ? ? (၂၀၂၀) ခုနှဈမှာ ပိတျရကျတှအေမြားကွီးက စောငျ့မြှျောနသေေးတာကွောငျ့ အေးအေးလူလူအနားယူခငျြပွီး ငှကွေေးတတျနိုငျတဲ့သူတှအေတှကျ ဒီနှဈအတှငျး သှားရောကျလညျပတျသငျ့တဲ့နရော (၅) ခုကို ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
ဘာမွူဒါဒသေရဲ့ နဝေငျဆညျးဆာအခြိနျလေးကို ရမျတဈခှကျနဲ့ သာသာယာယာ ခံစားနတေယျလို့ မကျြလုံးလေးမှိတျပွီး စိတျကူးယဉျကွညျ့လိုကျပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာလညျး အဆိုပါကြှနျးပျေါက ဟိုတယျတှကေို (၅၀) ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြှော့စြေးပေးထားတာကွောငျ့ အမွနျဆုံးဘှတျကငျလုပျထားဖို့တော့ လိုအပျပါတယျ။
ကမျးခွသှေားရတာကို ခဈြမွတျနိုးသူတှအေတှကျ မဖွဈမနရေောကျဖူးသငျ့တဲ့ နာမညျကြျော ကမျးခွတေဈခုလို့တောငျဆိုရမှာပါ။ လကျရှိအခြိနျမှာလညျး မိုငျယာမီကိုသှားမယျ့ အမရေိကနျလကွေောငျးလိုငျးတှကေ မတျလ (၃၁) ရကျနအေ့ထိ (၂၀) ရာခိုငျနှုနျး စြေးလြှော့ပေးထားပါတယျ။
နာမညျကြျောမွို့ကွီးတဈမွို့ဖွဈပွီး ခရီးသှားရတာကို ခဈြမွတျနိုးသူမြားအတှကျ အိပျမကျမွို့လေးတဈမွို့လညျး ဖွဈပါတယျ။ ပီဇာခဈြသူမြားအတှကျလညျး အကောငျးဆုံးမွို့ဖွဈပွီး ပွဇာတျရုံမြား၊ ပှဲတျောမြားဖွငျ့ အမွဲတမျး စညျကားနတေတျသညျ့ မွို့ဖွဈပါတယျ။
နာမညျကြျောအိုလံပဈ အပွေးသမား အူစိနျဘော့ရဲ့ မိခငျနိုငျငံဖွဈပွီး သှားရောကျလညျပတျခငျြစရာ မွို့လေးတဈမွို့လညျး ဖွဈပါတယျ။
ကာရဘေီယံဒသေတှငျးမှ နိုငျငံတဈနိုငျငံဖွဈပွီး တဈနှဈပတျလုံး ပမျြးမြှအပူခြိနျ (၈၀) ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျအထိ ရှိတာကွောငျ့ ဥရောပရဲ့အေးခဲတဲ့ရာသီဥတုကို ရှောငျရှားလိုသူမြားအတှကျ သှားရောကျလညျပတျရနျ သငျ့တျောတဲ့ နိုငျငံတဈနိုငျငံလညျး ဖွဈပါတယျ။
(၂၀၂၀) ခုနှစ်အတွင်း သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ နေရာ (၅) ခု။
နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်တွေ ပြီးဆုံးသွားလို့ စိတ်ညစ်နေကြပြီလား ? ? ? (၂၀၂၀) ခုနှစ်မှာ ပိတ်ရက်တွေအများကြီးက စောင့်မျှော်နေသေးတာကြောင့် အေးအေးလူလူအနားယူချင်ပြီး ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီနှစ်အတွင်း သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာ (၅) ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဘာမြူဒါဒေသရဲ့ နေဝင်ဆည်းဆာအချိန်လေးကို ရမ်တစ်ခွက်နဲ့ သာသာယာယာ ခံစားနေတယ်လို့ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း အဆိုပါကျွန်းပေါ်က ဟိုတယ်တွေကို (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ဈေးပေးထားတာကြောင့် အမြန်ဆုံးဘွတ်ကင်လုပ်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကမ်းခြေသွားရတာကို ချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် မဖြစ်မနေရောက်ဖူးသင့်တဲ့ နာမည်ကျော် ကမ်းခြေတစ်ခုလို့တောင်ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း မိုင်ယာမီကိုသွားမယ့် အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းတွေက မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်း ဈေးလျှော့ပေးထားပါတယ်။
နာမည်ကျော်မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားရတာကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက် အိပ်မက်မြို့လေးတစ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပီဇာချစ်သူများအတွက်လည်း အကောင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး ပြဇာတ်ရုံများ၊ ပွဲတော်များဖြင့် အမြဲတမ်း စည်ကားနေတတ်သည့် မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော်အိုလံပစ် အပြေးသမား အူစိန်ဘော့ရဲ့ မိခင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သွားရောက်လည်ပတ်ချင်စရာ မြို့လေးတစ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကာရေဘီယံဒေသတွင်းမှ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပျမ်းမျှအပူချိန် (၈၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ ရှိတာကြောင့် ဥရောပရဲ့အေးခဲတဲ့ရာသီဥတုကို ရှောင်ရှားလိုသူများအတွက် သွားရောက်လည်ပတ်ရန် သင့်တော်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Previous အငျတာမီလနျကစားသမားတဈယောကျကို ပေါငျသနျး (၈၀) ပေးပွီးချေါယူရနျ ပွငျဆငျနသေညျ့ မနျစီးတီး။
Next သွစတွေးလတြောမီးအတှကျ ထောကျပံ့ငှမြေားလှူဒါနျးခဲ့သညျ့ ကမ်ဘာကြျောအနုပညာရှငျမြား။